Gịnị ka Baịbụl kwuru gbasara ịgbaghara ndị kwara iko? | Ahụrụ m Jizọs n'anya
di Paolo Tescione - Machị 4, 2021
Akwụkwọ Nsọ, mgbaghara na ịkwa iko. Ana m edepụta amaokwu iri nke Akwụkwọ Nsọ na-ekwu maka ịkwa iko na mgbaghara. Anyị aghaghi ịkọwapụta na ịkwa iko, ịrara mmadụ nye bụ mmehie dị oke njọ nke Onyenwe anyị Jizọs katọrọ. Ma a mara mmehie ahụ ikpe ọ bụghị onye mmehie.
Jọn 8: 1-59 Ma, Jizọs gara n’Ugwu Oliv. N’isi ụtụtụ ọ laghachiri n’ụlọ nsọ ahụ. Ndi Israel nile we biakute Ya, we nọdu ala, kuziere ha ihe. Ndị odeakwụkwọ na ndị Farisii kpọtara otu nwanyị e jidere ka ọ na-akwa iko ma tinye ya n’etiti, wee sị ya: “Onye Ozizi, e jidere nwanyị a ka ọ na-akwa iko. Ma n'Iwu ahu, ayi nyere ayi iwu itu ndinyom ndia nkume. Ya mere, gịnị ka ị na-ekwu? " ... Ndị Hibru 13: 4 Ka alụmdi na nwunye ahụ bụrụ nke a na-asọpụrụ maka mmadụ niile nakwa na ihe ndina alụmdi na nwunye ahụ dị ọcha, dịka Chineke ga-ekpe ndị na-akwa iko na ndị na-akwa iko ikpe.
1 Ndị Kọrịnt 13: 4-8 Ima enyenyene anyanime onyụn̄ ọfọn ido; ịhụnanya adịghị ekwo ekworo ma ọ bụ na-anya isi; ọ dịghị mpako ma ọ bụ enweghị nsọpụrụ. Ọ naghị esi ọnwụ ka ụzọ ya dị; anaghị ewe iwe ma ọ bụ iwe; ọ dịghị a rejoiceụrị n’ime ihe ọjọ, kama ọ na-a rejoụrị ọ inụ n’eziokwu. Endhụnanya na-atachi obi n’ihe niile, na-ekwere ihe niile, na-enwe olileanya ihe niile, na-atachi obi n’ihe niile. Neverhụnanya anaghị agwụ agwụ. Ma amụma ndị ahụ, ha ga-agabiga; n'asụsụ, ha ga-akwụsị; ihe ọmụma, ọ ga-agabiga. Ndị Hibru 8:12 N’ihi na a ga m eme ebere n’ebe ajọ omume ha dị, agaghị m echetakwa mmehie ha ọzọ “. Abụ Ọma 103: 10-12 Ọ naghị emeso anyị ihe dịka m mmehie anyị, ọ naghịkwa akwụ anyị ụgwọ dị ka ajọ omume anyị si dị. N'ihi na dika elu-igwe di n'elu uwa, Otú a ka ebere-Ya di uku n'aru ndi nātu egwu Ya; olee otu ọwụwa anyanwụ si dị anya site n’ọdịda anyanwụ, n’ebe anyị nọ ka ọ na-ewepụ njehie anyị.
Akwụkwọ Nsọ, mgbaghara na ịkwa iko: ka anyị gee ntị n'okwu Chineke
Luk 17: 3-4 Lezienụ onwe gị anya! Ọ bụrụ na nwanne gị emehie, kọchaa ya, ọ bụrụkwa na o chegharịa, gbaghara ya, ọ bụrụkwa na o mehie gị ugboro asaa kwa ụbọchị wee gwa gị okwu ugboro asaa, sị, 'Echegharịwo m,' gbaghara ya. Ndị Galeshia 6: 1 Mụnna m, ọ bụrụ na onye ọ bụla enwee mmebi iwu ọ bụla, unu ndị mmụọ nsọ kwesịrị iji mmụọ nke obi ọma weghachi. Kpachara onwe gị anya ka a ghara ịnwa gị ọnwụnwa. Aisaia 1:18 “Bịanụ, ka anyị tụgharịa uche,” ka Jehova kwuru: “ọ bụ ezie na mmehie gị dị ka uhie, ha ga-adị ọcha dị ka snow; ọ buru na ha acha uhie uhie dika ogho uhie, ọ bu dika aji-anu ka ha gādi.
Abụ Ọma 37: 4 Ka obi tọọ gị ụtọ n’ime Onyenwe anyị, ọ ga-enye gị ihe obi gị chọrọ. Matiu 19: 8-9 Ọ gwara ha, sị: “N’ihi obi kpọrọ nkụ unu, Mozis kwere ka unu gbaa nwunye unu, ma site ná mmalite ọ dịghị otú ahụ. A na m agwa unu: onye ọbụla nke gbara nwunye ya alụkwaghịm, ewezuga ịkwa iko, wee lụọ nwunye ọzọ, na-akwa iko “.